Warshad Miisaanka Baabuurta - Shiinaha Soosaarayaasha Miisaanka Baabuurta, Alaab-qeybiyeyaasha
NOOCA CULAYSKA NOOCA
Miisaanka nooca godka ayaa ugu habboon meelaha leh boos kooban sida meelaha aan buuraha lahayn ee dhismaha godku uusan qaali ahayn. Maaddaama oo barxadda ay la siman tahay dhulka, baabuurtu waxay uga dhowaan karaan miisaanka dhan walba. Inta badan miisaanka dadweynaha ayaa doorbidaya qaabkan.
Astaamaha ugu muhiimsan waa barnaamijyadu si toos ah ayey isuguxiran yihiin, sanduuqyo isku xirnaansho uma dhexeeyaan, tani waa nooc la cusbooneysiiyay oo ku saleysan noocyadii hore.
Naqshadeynta cusub waxay sifiican uga shaqeysaa culeyska gawaarida culus. Marka naqshaddan la bilaabo, waxay caan ku noqotay isla markiiba suuqyada qaarkood, waxaa loo farsameeyay adeegsiga culus, soo noqnoqoshada, iyo maalinlaha ah. Gadiid farabadan iyo miisaanka culus ee wadada.
HOT Qashin GALVANIZED PEC Pick Fuulay AMA PITLESS fuuli
* Saxanka caadiga ah ama saxanka jajaban waa ikhtiyaari
* Ka kooban 4 ama 6 U alwaaxa U iyo dogobyada kanaalka C, adag oo adag
* Dhex-dhexaad la kala-gooyay, oo leh isku-xirid boolal
* Qalabka labajibbaaranaha sheybaarka laba geesoodka ah ama unug cadaadis riixo
* Ballaadh la heli karo: 3m, 3.2m, 3.4m
* Dhererka caadiga ah ee la heli karo: 6m ~ 24m
* Ugu badnaan Awoodda la heli karo: 30t ~ 200t
Miisaanka gaari xamuul ah
Dareemaha saxda ah ee sarreeya wuxuu muujinayaa miisaanka saxda ah ee saxda ah
Mashiinka oo dhan wuxuu culeyskiisu yahay 4.85kgs, waa mid la qaadi karo oo fudud. Waagii hore, qaabkii hore wuxuu ka badnaa 8 kg, kaas oo culays ku ahaa in la qaado.
Naqshad khafiifa, guud ahaan dhumucdiisuna waa 75mm.
Qalabka difaaca ee lagu dhejiyay, si looga hortago cadaadiska dareeraha. Dammaanadda f hal sano.
Qalabka aluminium ee aluminium ah, mid adag oo waara, midabaynta rinjiga, qurux badan oo deeqsi ah
Miisaanka birta ahama, fududahay in la nadiifiyo, miridh-caddeyn ah.
Xeedho caadiga ah ee Android. Markii lacag la bixiyo, waxay socon kartaa 180 saacadood.
Si toos ah u riix badhanka "beddelka unugga", wuxuu beddeli karaa KG, G, iyo
Qabo miisaanka sariirtaada - Muujiye aan caddayn qarax
Qiyaasta nooca xamuulka qaada sariirta ayaa sidoo kale loogu magacdaray miisaanka gawaarida yar yar ee wareega taas oo ka dhigaysa culeys fudud.
Qabo miisaanka xamuulka gawaadhida yar yar waxay miisaami karaan alaabada inta lagu guda jiro dhaqaajinta halkii culeyska loo wareejin lahaa miisaanka. Waxay badbaadin kartaa waqtigaaga shaqada, waxayna hagaajin kartaa waxtarkaaga shaqada. Ikhtiyaarrada tilmaamayaasha kala duwan, waxaad dooran kartaa tilmaamayaal kala duwan iyo cabbirka santuuqa sida ku cad jabkaaga. Miisaankani wuxuu keenaa miisaamid ama tirinta natiijooyin lagu kalsoonaan karo meel kasta oo lagu isticmaalo.
Miis dusha sare ee la taaban karo oo lagu miisaamayo baabuurta sharciga ah ee wadada maraya.
Waa naqshad isku dhafan oo adeegsanaysa sagxad la taaban karo oo qaab qaab bir ah u qaabeysan. Weelasha shubka ayaa ka imanaya warshadda oo diyaar u ah inay helaan shubka iyada oo aan loo baahnayn wax alxamid ah oo dhul ah ama meelayn dib-u-celin ah
baakadaha ayaa ka imanaya warshadda oo diyaar u ah inay helaan shubka iyada oo aan loo baahnayn wax alxamid ah ama meelayn rebar ah.
Tani waxay fududeyneysaa rakibidda waxayna hubineysaa tayada guud ee sagxadda.
HABKA DIIWAANKA / SHIRKADDA DIIWAANKA IYO BULSHADA NIDAAMKA
Samee barta lagu ogaanayo culeyska culeyska xad dhaafka ah, oo aruurinta macluumaadka gawaarida una sheeg xarunta xakameynta macluumaadka iyadoo loo marayo nidaamka miisaanka xawaaraha sare leh.
Waxay aqoonsan kartaa lambarka taarikada baabuurta iyo nidaamka ururinta caddaynta goobta si loogu wargeliyo baabuurka xad dhaafka ah iyadoo loo marayo nidaamka maareynta dhammaystiran ee xakamaynta cilmiyaysan ee overlad.
Waxaa si weyn loogu adeegsadaa qalabka miisaanka yar-yar ee gaadiidka, dhismaha, tamarta, ilaalinta deegaanka iyo warshadaha kale; dejinta ganacsiga u dhexeeya warshadaha, macdanta iyo shirkadaha, iyo ogaanshaha gawaarida gawaarida gawaarida ee shirkadaha gaadiidka. Miisaan degdeg ah oo sax ah, hawlgal habboon, rakibid fudud iyo dayactir. Adiga oo miisaamaya miisaanka kooxda ama dariiq dhexaad ee gaariga, culeyska gaariga oo dhan waxaa lagu helaa isku aruurinta. Waxay ka faa'iideysaneysaa dabaqa yar, dhismaha aasaaska oo yar, dib u dejinta fudud, firfircoonida iyo isticmaalka labadaba, iwm.
Tuujinta birta ah, waxay baabi'ineysaa shaqada aasaaska madaniga ama jaranjaro la taaban karo ayaa sidoo kale shaqeyn doonta, oo kaliya ubaahan shaqada aasaasiga ah. Kaliya meel adag oo siman oo siman ayaa loo baahan yahay. Nidaamkani wuxuu uruurinayaa keydinta kharashka shaqada aasaasiga ah iyo waqtiga.
Iyada oo la raacayo birta, miisaanka culus ayaa la kala qaadi karaa oo dib la isugu soo celin karaa muddo gaaban gudahood, waxaa si joogto ah loogu wareejin karaa meel u dhow aagga hawlgalka. Tani waxay gacan weyn ka geysan doontaa yareynta fogaanta macdanta "lead", yareynta kharashka wax lagu maareeyo, shaqaalaha, iyo wax soosaarka oo horumar lagu qiimeeyo.
Qiyaasta tareenka elektiroonigga ah waa aalad miisaamaysa tareennada ku socda tareenka. Badeecadu waxay leedahay qaab dhismeed fudud iyo sheeko, muuqaal qurux badan, saxnaan sare, cabbiraad sax ah, akhris macquul ah, xawaaraha cabbirka dhakhsaha leh, xasiloonida iyo waxqabadka lagu kalsoon yahay, iwm.
Miisaanka Dabaqa Dijitaalka ah ee Daran ee Dabiiciga ah Farsamaynta Gawaarida Gawaarida Sunta ee Carbon Q235B
Miisaanka dabaqa ee PFA221 waa xal miisaaman oo dhammaystiran oo isku dhafan barxad aasaasi ah iyo terminaal. Ku habboon soo dejinta dekedda iyo tas-hiilaadka guud ee wax-soo-saarka, barxadda miisaanka 'PFA221' waxay soo bandhigeysaa dusha sare ee dheeman dheeman ah oo bixiya caga ammaan ah. Terminalka dhijitaalka ah wuxuu qabtaa hawlo kala duwan oo miisaaman, oo ay ku jiraan miisaan fudud, tirinta, iyo uruurinta. Xirmooyinkaani si buuxda loo miisaamiyay waxay bixiyaan culeys sax ah oo la isku halleyn karo iyadoo aan la bixin kharashka dheeriga ah ee astaamaha aan loogu baahneyn codsiyada aasaasiga ah ee miisaaman.
5 Ton Miisaanka Dabaqa Dijital ah ee Dabaqa leh Miisaska Dabaqa / La Qaadan karo
Miisaanka dabaqa Smartweigh wuxuu isku daraa saxsanaanta gaarka ah iyo adkeysiga si looga hortago bey'adaha adag ee warshadaha. Miisaannadan culus ee culus waxaa lagu dhisay bir bir ah ama birta kaarboonka rinjiga leh waxaana loogu talagalay inay la kulanto baahiyo badan oo miisaamaya warshadaha, oo ay ku jiraan batchiga, buuxinta, miisaan qaadista, iyo tirinta. Badeecadaha caadiga ah waxaa lagu rinjiyeeyay bir khafiif ah ama bir bir ah oo aan cadi ahayn 0.9 × 0.9M ilaa 2.0 × 2.0M cabbir ahaan iyo 500Kg ilaa 10,000,000 Kg awoodood. Naqshadeynta rookaha-pin wuxuu hubiyaa soo noqoshada.
3 Ton Miisaanka Miisaanka Dabaqa Warshadaha, Iskeelka Dabaqa Dabaqa 65mm Madbacada Dhererka
Qiyaasta sagxadda dhulka ee 'PFA227' waxay isku daraysaa dhisme adag, oo si fudud loo nadiifin karo. Waa mid waara oo ku filan in la bixiyo miisaan sax ah oo la isku halleyn karo iyadoo loo istaagayo isticmaalka joogtada ah ee bey'adaha qoyan iyo kuwa wax daaqaya. Ka samaysan gebi ahaanba bir birta ah, waxay ku habboon tahay codsiyada nadaafadda ee u baahan maydhitaan joogto ah. Ka dooro noocyo badan oo dhammeystiran oo diidaya xoqidda isla markaana si fudud oo nadiif ah loo nadiifin karo. Adoo yareynaya waqtiga iyo dadaalka looga baahan yahay nadiifinta, cabirka dabaqa PFA227 wuxuu kaa caawinayaa inaad kordhiso wax soo saarka.
Mass Calibration, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Miisaanno La Xaqiijiyay, Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Shear Beam Load Cell, Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah,